को हुन् राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा पहिलोपटक परेका गुल्सन झा? :: Setopati
को हुन् राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा पहिलोपटक परेका गुल्सन झा?
सीताराम कोइराला काठमाडौं, भदौ ६
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले ओमानमा हुने विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिजका लागि शनिबार नेपाली राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको छ।
टिममा तीव्र गतिका बलर गुल्सन झा पहिलोपटक परेका छन्।
नेपाल, ओमान र अमेरिकाबीचको त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिजका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा घोषणा गरिएको १७ सदस्यीय टिममा गुल्सनले पहिलो पटक स्थान पाएका हुन्।
बन्द प्रशिक्षणमा रहेका कमलसिंह ऐरी र साहब आलम टोलीमा अटाउन सकेनन्।
झा गत चैतमा भएको काठमाडौं मेयर्स कपका दौरान चर्चामा आएका बलर हुन्।
नेपाल पुलिस क्लबबाट खेलेका उनले फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। पुलिसबाट फाइनलमा दोस्रो खेल खेल्दा १७ वर्षीय तीव्र गतिका बलर झाले ४ विकेट लिएका थिए।
सर्लाही मलगंवाका झाले एपिएफका सुरुवाती चार मध्ये तीन ब्याट्सम्यानलाई आफ्नो सिकार बनाएका थिए। उनले एपिएफका ओपनर शंकर रानालाई ४ रन, कप्तान शरद भेषवाकरलाई शून्य, भुवन कार्कीलाई पनि शून्य र कमलसिंह ऐरीलाई १ रनमा आउट गरे।
झाको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा पुलिसले ८ विकेटको जित निकाल्दै उपाधि जित्यो।
त्यतिबेला एपिएफका कप्तान शरदले पुलिसका बलर झाले उत्कृष्ट बलिङ गर्दा आफूहरुले कमजोर ब्याटिङ गरेको बताएका थिए। उनले झालाई 'सरप्राइज प्याकेज' को संज्ञा दिएका थिए।
६.१ इञ्च अग्ला झालाई पुलिसले मेयर्स कपदेखि टिममा भित्र्याएको थियो। त्यसअघि झाले प्रधानमन्त्री कपको छनोट प्रदेश २ बाट खेलेका थिए। त्यतिबेला उनी प्रदेश २ को बैकल्पिक खेलाडीमा परेपछि प्रधानमन्त्री कप खेल्न पाएनन्।
प्रधानमन्त्री कपका लागि टिममा नपरेकोमा झालाई कुनै चिन्ता थिएन। 'टिममा सिनियर खेलाडी थिए। त्यहीँ भएर टिममा स्थान पाइन,' झाले सेतोपाटीसँग भनेका थिए,'कुनै दिन मौका पाउनेमा भने आसावादी थिए।'
त्यही बेला पुलिसले टिममा तीव्र गतिका बलर खोजिरहेको थियो। पुलिसका प्रशिक्षक मनोज कटवालले झाबारे थाहा पाएपछि उनलाई ट्रायलका लागि काठमाडौं बोलाए।
ट्रायल र अभ्यास खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि उनलाई पुलिसले टिममा आबद्ध गर्‍यो।
ढाँडमा समस्या भएपछि झाले मेयर्स कपको सुरुवाती खेल खेल्न सकेनन्।
काठमाडौं मेयर्स ११ विरुद्धको सेमिफाइनलमा भने उनले मौका पाए। तर सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न सकेनन्।
मेयर्स कपको फाइनलमा गरेको प्रदर्शनले सबैको ध्यान खिँचेका झा भारतको राँचीस्थित अरुणोदय क्रिकेट एकेडेमीमा चार वर्षअघि क्रिकेट प्रशिक्षणका लागि भर्ना भएका थिए। क्रिकेटक्रेजी बुबाले आफ्नै खर्चमा उनलाई एकेडेमीमा भर्ना गरिदिएका थिए।
मेयर्स कपमा विकेट लिएपछि सहकर्मीसँग खुसी मनाउँदै गुल्सन झा।
राँचीमा क्रिकेट सिक्दा उनले बलिङमा निखारता ल्याए। त्यहाँ क्रिकेट सिक्दा उनले स्थानीय प्रतियोगिता खेलेका थिए।एकेडेमीमा सिकेका धेरैले भारतको प्रतिष्ठित रणजी ट्रफी खेलिरहेको झाको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रभावशाली खेल देखाएका झाको लक्ष्य नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट क्रिकेट खेल्ने छ। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने नजिक रहेका अब उनी राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गर्न चाहान्छन्।
सम्भवत अब उनले भदौ २८ देखि असोज ४ गतेसम्म ओमानमा हुने सिरिजमा राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गर्नेछन्।
त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग दुई–दुई खेल खेल्नेछ। सिरिज अघि नेपालले भदौ २० र २३ गते ओमानमा पपुवा न्युगिनीसँग एकदिवसीय खेल खेल्ने तय छ।
विश्वकप लिग–२ मा नेपालसहित पपुवा न्युगिनी, ओमान, अमेरिका, स्कटल्यान्ड, नामिबिया र युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई) रहेका छन्। लिग–२ अन्तर्गत नेपालले हालसम्म ओमान र अमेरिकासँग सिरिज खेलेको छ। तीमध्ये अमेरिकासँग दुवै खेलमा जित र ओमानसँग दुवै खेलमा बेहोरेको नेपालको चार अंक छ।
नेपाल अंक तालिकाको छैटौँ स्थानमा छ। यस्तै ओमान १० खेलमध्ये आठमा जीत र दुईमा हार बेहोर्दै १६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। अमेरिका १२ खेलमा ६ मा जित र ६ मा हारसहित १२ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ। स्कटल्यान्ड आठ खेलमा चारमा जित र तीनमा हारका साथ नौ अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ।
स्कटल्यान्डले खेलेको एउटा खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। नामिबिया सात खेलमा चारमा जित र तीनमा हार बेहोर्दै आठ अंकसहित चौथो स्थानमा छ ।
यसैगरी युएई सात खेलमा तीनमा जीत र तीनमा हारकासाथ सात अंक जोड्दै पाँचौँ स्थानमा छ। युएईले खेलेको एउटा खेल रद्द भएको थियो।
पपुवा न्युगिनी हालसम्म खेलेका आठवटै खेलमा पराजित भएको छ। पपुवा न्युगिनी अंकविहीन बन्दै लिग–२ को पुछारमा छ।
लिग–२ अन्तर्गत सन् २०२३ सम्म प्रत्येक टोलीले ३६ एकदिवसीय खेल खेल्नेछन्। लिग–२ का शीर्ष तीन टोली सन् २०२३ मा भारतमा आयोजना हुने एकदिवसिय विश्वकपका लागि ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउने छन् भने पुछारमा रहने चार टोलीले प्लेअफ खेल्नेछन्।
ज्ञानेन्द्र मल्ल (कप्तान), दीपेन्द्रसिंह ऐरी (उपकप्तान), कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, गुल्सन झा, रोहितकुमार पौडेल, सुशन भारी, शरद भेषवाकर र विक्रम सोव।
मुख्य प्रशिक्षक - डेभ वाटमोर
व्यवस्थापक - मोहम्मद दाउद अन्सारी
टेक्निकल एनालिस्ट - रमन शिवाकोटी
फिजियो - विक्रम न्यौपाने
ट्रेनर - राकेश काशिभाइ गोहित
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ६, २०७८, १२:१४:००